Lugadle ezansi kwebhande ukhuvethe kuMbali - Bayede News
Ukushona kwamalungu amahlanu omndeni womlingani wakhe ngenxa yokhuvethe sekwenze uMbali “Don Queen” Zantsi wanquma ukungaqhathi zimpi kulo nyaka. UMbali ungumnikazi weShowtime Boxing Promotion edume ngokuqhatha izimpi zomhlaba ikakhulukazi zabesifazane.
Lo mqhathi ufinyelela kulesi sinqumo sokuyeka yonke into nje vele isibhakela simile ezweni nasemhlabeni jikelele kwazise kusahlasele ukhuvethe. UNgqongqoshe Wezemidlalo Nezokungcebeleka uMnu uNathi Mthethwa usanda kumemezela ukuthi izindawo zokujima abesibhakela zizovulwa mhla lulunye kuNcwaba.
Nokho uMbali uthe uHulumeni usebavumele abantu abazihlanganise nesibhakela ukuthi bangaqale balungiselele ukubuyela emajimini kodwa yena angeke esazihlupha.
“Kuyasabisa esengikubone kwenzeka kude naseduze kwami ngalesi sifo. Ngiqale ngasibukela kude kodwa kuse ngokunye umngani wami eselahlekelelwa amalungu omndeni amahlanu. Senginqume ukungazihluphi ngokuzamela osomankomane izimpi. Ukhumbule phela ukuthi uma uzoqhatha kumele osomankomane, abaqeqeshi, onompempe, amajaji bayiswe ndawane thize bahlale ngabodwana kuze kufike usuku lwezimpi. Yonke leyo nto izongigqobhoza iphakethe,” kubeka uMbali.
Uthe okunye abantu hleze abangakunaki ukuthi uma uhlela izimpi akumele ushintshe ngemizuzu yokugcina osomankomane abasuke sebefakwe ohlwini ngoba basuke sebezisayinile izinkontileka.
“Sikuphi isidingo sokujaha ukuqhatha ngoba uzothola imadlana ekubeni ubeka engcupheni impilo yabanye abantu. Uma ubheka usuku nosuku siyenyuka isibalo sabantu abathelelekile nabashonayo. Ingakho sithi izingane zethu azingalubhadi esikoleni. Njengoba futhi kuthiwa lesi sifo simandla uma kusebusika, uyabona-ke ukuthi sisengozini ngoba kusebusika nje.”
UMbali uvamise ukuqhatha izimpi ngoNcwaba eqondanise nenyanga yokubungaza abesifazane.
Lo mqhathi ozalelwe ePort Elizabeth wafika ngeshodi kulo mdlalo ngemuva kokuncela ulwazi enkakheni uMzimase Mnguni okhiqizele iNingizimu Afrika inqwaba yompetha bomhlaba.
Umqhudelwano wakhe wokuqala wawungowezi-2007 eThekwini lapho uNoni “Shee Bee Stingin” Tenge no-Unathi “African Queen” Myekeni baqala ukuzibonakalisa khona.
UTenge nguye osahamba phambili kubadlali asebezuze okuningi ngemuva kokuvezwa kwekhono lakhe uZantsi. Lo mshayisibhakela waseMdantsane e-East London uphethe irekhodi lokunqoba izicoco zomhlaba ezintathu.
Inhlangano yezakhamuzi inuka santungwana ngokwenzeka eSimangaliso Wetland
Waqala ngese-International Boxing Federation (IBF) Welterweight nese-WBF esisindweni seWelterweight neseWorld Boxing Association (WBA) Junior Middleweight.
Naye uMyekeni usehambe elide ibanga njengoba eseke waba umpetha weWorld Boxing Federation (WBF) World Junior Featherweight nasesisindweni seFeatherweight.
Ukuzikhandla kukaMbali ekufukuleni osomankomane besifazane kumhlomulise ngemiklomelo emikhulu.
I-WBF ezinze eBelgium yamklomelisa ngendondo yokuba iPromoter of The Year ngowezi-2015 kanti iBoxing South Africa yamgixabeza ngeChaiperson’s Award ngowezi-2016.
Usehlabane kabili ngendondo yeWomen in Sport eyenziwa iG-Sport Magazine.
nguLinda Ximba Jul 31, 2020